Ka Reebida Dambiisha Dhamaystiran Email | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 15, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhowaan la wadaagnay macluumaad muuqaal ah oo keenay caddayn ah in dhaqsaha badan a wakiilka iibka ayaa soo celiyey wicitaan macaamilka la filayo iyada oo loo marayo shabakadda, heerka beddelaadda sare. Layaab maleh, isla caqliga log dadka ku xareysan SaleCycle waxay ogaadeen in sida ugu dhaqsaha badan ee laguu soo diro emaylka gawaarida dukaamaysiga, heerka sarrifka ayaa sareeya!
Waxaa jira saddex su'aalood oo muhiim ah oo ku saabsan emaylka ka tagista dambiilaha ee SaleCycle uu sii wado inuu ka jawaabo:
waqtiga: Muddo intee le'eg ayaan sugeynaa inaan email u dirno macaamiisheenna?
Tone: Miyaan toosnaa, mise adeegsanaa codka adeegga macaamiisha?
Content: Maxaan ku dari karnaa emaylka si aan macaamiisheenna u iibsanno?
SaleCycle wuxuu isku keenay Infographic kaas oo ka jawaabaya su'aalahaas. Xogta waxaa laga soo qabtay 200 oo magac caalami ah hogaaminaya iyo dhaqankoodii ugu fiicnaa ee ku saabsan ka tagitaanka gaariga wax iibsiga:
Tags: emaylka ka tagidaDambiil ka tagidhababka ugu wanaagsanemaylka e-commerceemailwareegga iibkaGawaarida dukaanka oo laga tago
Istaraatijiyadaha Guusha ee Khiyaanada Bulshada
16, 2012 at 2: 11 AM
Doug qoraalkani waa mid cabsi badan! Wax walba noogu sharxaya suuqgeynta emaylka. Waxaad raadineysay qorshe fudud oo fudud oo horeyba loo tijaabiyay! Waad ku mahadsan tahay boostada!
16, 2012 at 10: 36 PM
Mahadsanid @ google-b9b77ac949b0387c92d9cc6f0a228fc6: disqus, sidoo kale waxaan u maleynayay!